Qaar kamid ah jilayaasha caanka ah ee reer Marooko | Safarka Absolut
Qaar ka mid ah jilayaasha caanka ah ee reer Morocco
Sawir | As.com
Shineemo Marooko waa warshad weyn oo ku taal Afrika oo aad ugu xeel dheer sheegista sheekooyinka xiisaha leh, dhaqaaqa iyo kuwa gaarka ah. Jilayaasheeda ayaa ka mid ah kuwa ugu guulaha badan qaaradda qaar badanna waxay go'aansadaan inay u boodaan Yurub iyagoo raadinaya mashaariic cusub oo ay ku ballaarinayaan shaqooyinkooda oo ay caan ku yihiin adduunka.
Maqaalkani waxaan ka hadli doonnaa dhabbaha dhowr jilayaal caan ah oo reer Marooko ah, oo guul weyn iyo mustaqbal ku leh warshadaha filimada oo runtii hubaal waad taqaanay waayo waxaan ku arkay iyagoo badan oo filim, telefishan iyo riwaayado ah. Haddii aad u jeceshahay shineemooyinka iyo nidaamkeeda xiddig, ha moogaan!
1 Mina El Hammani
4 Gaad Elmaleh
Wuxuu ku dhashay 1993 magaalada Madrid laakiin wuxuu ka soo jeedaa qoys asal ahaan ka soo jeeda Morocco. Maaddaama ay aad u yarayd, Mina El Hammani (27 jir) marwalba way ogayd inay rabto inay nafteeda u hurto adduunka jilitaanka. Waalidiinteeda waxay ka baratay dhaqanka dadaalka si ay u gaarto riyadeeda, sidaa darteed waxay bilowday inay ka shaqeyso iyadoo 16 jir ah makhaayad cunnada laga cuno oo degdeg ah iyo sidoo kale inay ka mid noqoto dadka keena Palacio de los Deportes ee Madrid si ay u bixiso kharashka waxbarashadeeda adduunka. tiyaatarka filimada.
In kasta oo ay dhowr jeer masraxa la soo gashay “Dhulka Gudihiisa” ee Paco Becerra (2017) ama ay ku samaynayso akhriska riwaayadaha ah ee 'De mujeres sobre mujeres' ee Ellas Crean Festival (2016), oo ku saleysan qoraallada laga soo xigtay qorayaal kala duwan sida sida Dakota Suárez, Sara García, Laila Ripoll, Yolanda Dorado iyo Juana Escabias.
Si kastaba ha ahaatee, Mina El Hammani waxay u noqotay weji caan ah guud ahaan dadweynaha ka soo muuqashadeedii telefishanka ee ugu horreeyay taxanaha «Centro Médico». Kadib wuxuu yimid jilitaankiisii ​​ugu horreeyay ee taxanaha Telecinco ee "El Príncipe" (2014) halkaas oo uu nolosha ku siiyay Nuur xilli ciyaareedkii labaad, oo ah horjoogaha Fatima (Hiba Abouk) oo Mina ay si weyn ugu riyaaqday tixraac ahaan adduunka waxqabadka iyo jilitaanka. icon dhaqamo badan.
Isugeynteeda shaashadda yar waxay timid 2017 markii ay heshay kaalinteedii ugu horreysay ee hoggaanka taxanaha "Servir y Protecte" (2017) oo ah Salima mid kamid ah shirqooladii lala damacsanaa Pepa Aniorte.
Taxanaha ay Mina El Hammani ku kasbatay caanku wuxuu ahaa "Elite" (2018) halkaas oo ay ku jileyso Nadia, Arday haysata deeq waxbarasho oo u soo gashay inay wax ka barato dugsigan heerka sare ah iyada oo gurigeeda joogta waxay ku nooshahay tacliinta adag ee muslimiinta ay ku barteen waalidkeed, oo iyagu leh ganacsi hooseeya. Qorshaha gudahiisa, qaanuunka dabeecaddiisu waa mid ka mid ah kuwa ugu taajirsan sababtoo ah isku dhaca labada adduunba abuuraan.
Ka dib markay dhex marto "Elite", atariishada asal ahaan ka soo jeeda Morocco waxay ka qayb geli doontaa "El Internado: Las Cumbres" (2021) oo laga helo Amazon Prime Video iyo sidoo kale waxaa loo sii daayay sidii muuqaal ah astaanta Guerlain. Atariishadan asal ahaan ka soo jeeda Morocco waxay ku hadashaa Carabi, Ingiriis iyo Isbaanish.
Sawir | Saxaafadda Europa
Adil Koukouh (25 jir) wuxuu ku dhashay Tetouan 1995. Isaga iyo qoyskiisa waxay u guureen Madrid halkaas oo uu ku noolaa tan iyo 9 jirkiisii. Ninka dhalinyarada ah wuxuu doonayay inuu noqdo qof lagu daydo laakiin iskuulka Javier Manrique, A Pie de Calle, waxay ku arkeen awoodiisa kamarad horteeda waxayna ku qanciyeen in jilitaanku uu isagu yahay waxkiisa. Wuxuu u fiirsaday iyaga oo ku dhameeyay barashada Farshaxanka Farshaxanka, taas oo u horseeday inuu noqdo jilaa muujinta iyo balanqaad fasiraad Spain
Jilayaal badan oo dhalinyaro ah waxay bilaabaan inay qaadaan talaabooyinkooda ugu horeeya shaashadda yar si ay ugu soo boodaan shineemada mar dambe. Sidoo kale waa kiiska Adil Koukouh oo qaaday talaabooyinkiisii ​​ugu horeeyay ee uu ku jilayo xilli ciyaareedkii ugu horeeyay ee taxanaha "B&B: de Boca en boca" (2014), halkaasoo ay ka soo qeyb galeen jilayaasha sida Belén Rueda, Macarena García, Fran Perea ama Andrés Velencoso.
Wuxuu sidoo kale kaqeyb qaatay taxanaha Telecinco "El Príncipe" (2014), oo jabiyay diiwaanka dhagaystayaasha xilli ciyaareedkiisii ​​ugu horeeyay. Halkaas ayuu ku ciyaaray Driss, oo ah wiil reer Marooko ah oo ku hamiyey inuu noqdo ciyaaryahan kubadda cagta ah. Taxanahan, wuxuu biilka la wadaagay xiddigaha sida Rubén Cortada, Alex González, Hiba Abouk, José Coronado, Thaïs Blume ama Elia Galera.
Telefishanka, wuxuu dhawaanahan qayb ka ahaa taxane sida «Vis a vis» (2015) by Antena 3, «El Cid» (2019) by Amazon Prime Video or Entrevías (2021) by Mediaset Spain.
Adil Koukouh wuxuu sidoo kale kaqeyb qaatay shineemada, gaar ahaan isagoo jilaa ka ahaa filimka "A secretly" (2014) oo uu Director ka ahaa uuna u qoray Mikel Rueda Vertigo Films. Filimku wuxuu markii ugu horreysay ka soo muuqday Bandhig Faneedka Malaga. Dhexdeeda, Jilaagan yar ee reer Marooko ah wuxuu isku dhejinayaa kabaha Ibrahim, oo ah wiil sheeko jacayl kula nool wiil kale oo la yiraahdo Rafa. Shaki la'aan, waa door adag oo rookie ah oo ay tahay inuu qaado culeyska doorka hogaaminta filimka. Waxaa filimka ku weheliya jilaayaal dhererkiisu yahay Germán Alcarazu, Álex Angulo iyo Ana Wagener.
In kasta oo ay yaraanteedii ahayd, haddana iyadu waxay u baxday masrax si ay uga qaybgasho riwaayadda "Rashid iyo Gabriel" (2019), oo uu qoray Gabi Ochoa oo ah astaamaha ugu muhiimsan.
Sawir | Antena3.com
Nasser Saleh (28 jir) waa jilaa Isbaanish ah oo asal ahaan ka soo jeeda Morocco oo laga soo bilaabo yaraantiisii ​​ka soo shaqeeyay qaar ka mid ah waxsoosaarkii ugu guulaha badnaa ee sheekooyinka Spanish-ka. Waxay mustaqbalkiisa ciyaareed ka bilaabay on telefishanka ee taxanaha "HKM" (2008) by Cuatro nolosha siinta Moha iyo ka dib wuxuu dhex maray "La pecera de Eva" (2010) la Alexandra Jiménez inuu u ciyaaro Leo. Si kastaba ha noqotee, maahan ilaa uu ka mid noqday jilaayaasha "Física o Química" inuu noqday mid caan ah.
Sanadkii 2008, "Física o Química" waxaa laga daawaday Antena 3, oo ah mid ka mid ah taxaneyaashii ugu da'da yaraa ee sanadihii la soo dhaafay ka jiray dalkeena. Fiction ahaa isha ka mid ah jilayaasha badan oo dhallinyaro ah, sida Nasser Saleh, kaasoo xilli ciyaareedkii shanaad ciyaaray Roman dhallinyarada Moroccan ah by mid ka mid ah macalimiinta Zurbarán qaatay.
Taxanahan dhalinyarada ka dib wuxuu bilaabay mashaariic kale sida "Imperium" (2012) halkaas oo uu ku ciyaaray Crasso (addoon guriga Sulpice ah), "Toledo: ka gudubka masiirka" (2012) (halka uu ku lahaa doorka Abdul) ama "Amiirka" (2014). Wuxuu sidoo kale ka soo muuqday «Tiempos de guerra» (2017), soo saar kale oo Antena 3 ah oo telefishanka ah.
Marka laga soo tago ka shaqeynta telefishanka, xirfadeeda waxay ku soo korortay doorarka filimada ee filimada waaweyn sida "Biutiful" (2010) Waxaa Director ka ah Alejandro González Iñárritu waxaana jilaya Javier Bardem ama "Ma jiri doonaan nabad kuwa sharka la ah" (2011) oo uu hogaaminayo Enrique Urbizu iyo halka uu shaashadda kula wadaagay José Coronado.
Sawir | Netflix.com
​Gad Elmaleh (49 jir) waa jilaa reer Marooko iyo majaajiliiste ku dhashay Casablanca oo ku raaxeysata guul weyn Faransiiska. Hadiyadda fasiraadda waxay ku socotaa xididdada xididdada maxaa yeelay aabihiis wuxuu ahaa miime. Sannadkii 1988-kii ayuu ka soo safray dalka Marooko oo uu u dhoofay dalka Kanada, halkaas oo uu ku noolaa muddo afar sano ah Halkaas ayuu ku bartay cilmiga siyaasadda, wuxuu ka shaqeeyay raadiyaha, wuxuuna ku qoray hal-ku-dhegyo badan oo uu ka sameeyay naadiyadii Montreal.
Sanado kadib, Jilaagan reer Marooko wuxuu u safray Paris halkaas oo uu ku qaatay koorsada Le Cours Florent wuxuuna qoray riwaayad la yiraahdo 'Décalages' oo wax badan uga sheekeysay waxyaabihii uu kala soo kulmay Montreal iyo Paris sanadkii 1996. Seddex sano ka dib, wuxuu soo bandhigay bandhigiisa labaad ee kaligiis loo yaqaan. 'La Fri Normale'.
Gaad Elmaleh noqday majaajiliiste iyo haybadda leh, laakiin waxa uu sidoo kale waa actor weyn kaasoo wacdaro dhowr filim oo Faransiis ah sida "Game ee doqomo" (2006), "raaxo A Khiyaano" (2006), ama "barka ee Paris" (2011). Sidoo kale wuxuu sameeyay talaabooyinkiisii ​​ugu horeeyay asagoo ah qoraa shaashad iyo agaasime ahaan. Intaa waxaa dheer, wuxuu asal ahaan ka soo jeedaa Yuhuudda wuxuuna ku hadli karaa dhowr luqadood oo ay ku jiraan Carabi, Faransiis iyo Cibraaniga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Qaar ka mid ah jilayaasha caanka ah ee reer Morocco
Cashada Kirismaska ​​ee Ruushka
Dhaqanka iyo dhaqanka dhismaha ee Popayán